Soo dejisan Winamp 5.66 – Vessoft
Soo dejisan Winamp
Winamp – ciyaaryahan caan ah warbaahinta la qaababka badan. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay, sida MP3, OGG, AAC, regelingen, mod, XM, S3M, IT, MIDI, AVI, ASF, MPEG, NSV, iwm Winamp kuu ogolaanaya in aad si toos ah u astaysto playlist iyo waafajinta music la qalabka la qaadi karo. software waxay leedahay set oo ah qalab horumarsan si astaysto Oxperts ee ciyaaryahan ee baahida shakhsi ahaaneed. Winamp ku jira goolkii barbaraha ka dhisay-in si ay ula qabsadaan ku dhawaaqa iyo guurka siman u dhexeeya kuwan raadkaygay maqal ah.
Taageerada audio iyo video qaabab loo jecel yahay
radio Internet iyo TV
hargaha iyo plugins badan oo
Comments on Winamp:
Winamp Software la xiriira:
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka functional oo taageero ka qaabab warbaahinta caan ah. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah hawlaha waxtar leh oo kuu ogolaanaya in aad astaysto subtitles ah.
العربية, English, Українська, Français... VLC 2.2.4
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka ayaa si Radidiyaha files warbaahinta ee tayada sare leh set badan oo ah qalab loogu talagalay Iyada. Sidoo kale software ka taageertaa shaqo ee loo maqli karo ee video webigu.
English, Українська, Français, Español... Kodi 16.1
العربية, English, Українська, Français... iTunes 12.5.1
Ciyaaryahan Media Phone Ciyaaryahanka caanka ah in loo maqli karo files warbaahinta. software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas xogta u dhexeeya oo aad computer iyo qalab Apple.
English, Українська, Français, Español... Nata Player 4.15
Ciyaaryahan Media fudud An in la isticmaalo ciyaaryahan audio oo ay taageertaa qaabab loo jecel yahay. software The kuu ogolaanayaa inaad dhegayso raadiyaha online iyo si ay u disc a gubi music.
English, Українська, Français, Deutsch... Imagen 3.1.2
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahan warbaahinta ayaa la taageero ka audio iyo video qaabab loo jecel yahay. Software ayaa awood u si aad u eegto macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan files oo screenshots ah.
Ciyaaryahan Media Phone Software waafajinta xogta u dhexeeya computer iyo qalab Windows Phone ah. Software ayaa awood u si loo casriyeeyo nidaamka qalliinka ee qalabka iyo xakameeyo playlists ee maktabadda warbaahinta.
English, Français, Español, Deutsch... Clementine 1.3.1
Ciyaaryahan Media Ku haboon ciyaaryahan si Radidiyaha ah qaabab loo jecel yahay. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad nuqul ka music ah in qalabka la qaadi karo, oo maqla adeegyada raadiyaha caan ah.
العربية, English, Українська, Français... Banshee 2.4.0 Alpha
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka dhamaystiran Radidiyaha audio iyo video files. Sidoo kale ciyaaryahanka taageertaa loo maqli karo ee Podcasts iyo idaacadaha.
Ciyaaryahan Media Agabka in ay baadhaan iyo muusig. Software wuxuu qabanqaabiyaa maktabadaha music iyo markaas waxaad iyaga ku saaxiibbadayda la wadaagi karo.
English, Français, Español, Deutsch... Startpack Launcher 1.0.9
Qaar kale waxay Software ee u goobaha inta badan la isticmaali ay helaan haboon. Software waxay siisaa inay helaan deg deg ah meelaha ugu cadcad by keenshaliga links ku Taskbar.
Ayna System Tool si loo xakameeyo loading ee si toos ah codsiyada, adeegyada iyo qaybaha. software The kuu ogolaanayaa inaad reserved bilowga automatic cinwaano dhowr.
Ayna System Software ayaa si kor loogu qaado wax-qabadka your computer. Software ka kooban yahay kala duwan oo ka mid ah qalabka si loo dedejiyo oo ay tayadoodii nidaamka.
English, Українська, Français, Español... Foxit Reader 7.2.8.1124 iyo 7.2.5.0930
PDF Software ayaa si aad u eegto oo aad daabacan faylasha qaabka PDF. Software wuxuu taageeraa tayo sare leh xawaaraha shaqada iyo gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar.